I-Savita Bhabhi: Eyona Comic idumileyo kunye nephikisayo eIndiya | Ukuhamba kwe-Absolut
Ndiyakuthanda ukufunda ii-comics kwaye luhlobo lobugcisa olungenayo imida. Kungenzeka ukuba ii-comics ziyafana ne-United States, i-Yurophu okanye i-Japan, kodwa inyani kukuba, umzekelo, kukwakho nee-comics e-India kwaye enye yezona zihlekisi ithandwayo Savita Bhabhi.
Yiloo nto ibizwa ngokuba yiyo I-comic ethandwa kakhulu eIndiya kunye nembambano kwaye namhlanje, eAbsolut Viajes, sizimisele ukudibana naye. Ihlaya laseIndiya? Ngokwenene? Ewe ewe, lixesha lokuba ushiye i-manga kunye nezinye iicomics zaseAsia naseNtshona okwethutyana ukuze wazi i-comic Yenziwe e india.
1 IiComics eIndiya
2 USavita Bhabhi, umdlalo ohlekisayo we-porn
3 IiAdventures zikaSavita Bhabhi
Makhe siye kwiindawo ezithile, utshilo uJack Ripper. Ke, masiqale ngokwazi ilizwe lamahlaya kancinane kweli lizwe likhulu nelikhulu. Iicomics zaseIndiya zihamba ngegama lika chitrakatha. Eli gama libandakanya iincwadi ezihlekisayo kunye neenoveli zemizobo ezimele inkcubeko yelizwe, kwaye ke zipapashwa kwiilwimi ezininzi ezithethwa apha.
Masikhumbule ukuba i-India inenkolo etyebileyo kunye neentsomi, ke ilizwe linesiko elide labafundi zeencwadi, iinoveli zemizobo kunye neehlaya ezisusela ebuntwaneni. Nangona kunjalo, ishishini lokuhlekisa liqala kwii-60s, kodwa kuphela kusapho nakubantwana esidlangalaleni. Isebe labantu abadala lohlobo kamva lavela apha, kodwa ekugqibeleni laphumelela.
Kwinqanaba lezoqoqosho, I-comic yaseIndiya yayiphumelele kakhulu kwiminyaka yoo-80 kunye nokuqala kweshumi leminyaka elilandelayo, iminyaka apho abashicileli bengayinikanga enkulu. Ewe, ukuprinta okufanayo kunye neenombolo zentengiso zehlile ukusukela ngoko, njengakwilizwe liphela, nakwicandelo labantwana khange ikwazi ukukhuphisana namajelo kamabonwakude okanye ishishini lomdlalo wevidiyo.
Ngapha koko, unyaka nonyaka kukho iminyhadala ethile edibanisa umhlaba wee-comics zaseIndiya, ezinje nge IComic Con India, i-Comics Fest India, i-Indie Comix Fest okanye iNew Delhi yeNcwadi yeHlabathi. Kuyinyani ukuba uninzi lwabenzi bamahlaya baseIndiya baqale ukufudukela eNtshona besebenza kancinci kwiNdlu emnyama, DC, Archies okanye Image.
USavita Bhabhi, umdlalo ohlekisayo we-porn
Ukwazi okuncinci malunga nelizwe lamahlaya amaNdiya, ngoku masiqhubeke kule ehlekisayo kunye nempikiswano. Kutheni usenza impikiswano? Kungenxa yokuba i Imifanekiso engamanyala kwaye isini eIndiya ngumba omkhulu.
USavita ligama le phambili kwabasetyhini, un umfazi Ngokuziphatha gwenxa ngokwesiko lamaNdiya. Elinye igama, bhabhi, lithetha usibazala kwaye ligama elihloniphekileyo elisetyenziswe emantla elizwe ukubhekisa kubafazi bendlu.
Ezihlekisayo yavela okokuqala kwi-2008, ngo-Matshi, kwaye kwangoko kwaba nempikiswano kuba uluntu lwaseIndiya lugcina kakhulu. Uninzi luthi i-comic imele iphiko lenkululeko yoluntu, kodwa sele siyazi ukuba iphiko lincinci.
Kodwa ngaba iphonografi ayikho mthethweni eIndiya? Ewe, ukuvelisa amanyala akukho mthethweni, ke kwasekuqaleni iwebhusayithi apho i-comic yapapashwa khona yahlolwa ngurhulumente uhlengahlengisa kumthetho wangoku. Kodwa ngoko nangoko kwakukho amabango e-liberal emva koko uninzi lweentatheli lwangenelela ukugxeka umgaqo karhulumente, bewubiza ngokuba awunabuntu kwaye ngusolusapho. Ke, amanzi anyikima ngokwaneleyo ukuba i-comic ingatshatyalaliswa.
Ekuqaleni i abadali behlaya kunye nesiza apho yapapashwa yagcinwa kwi ukungaziwa, Ngaphantsi kwegama ngokubanzi le-Porn Empire, kodwa emva konyaka, ngo-2009, IPuneet Agarwak, uMdali wale ndawo kunye namaNdiya esizukulwane sesibini ahlala e-UK, wazityhila ukuba ungubani na ukuze aqhubeke nokulwa nokuvalwa. Kodwa usapho lwalungonwabanga kwaye kwiiveki ezimbalwa kamva babhengeza i yehla uye kwihlaya.
Ayikhange ihlale ixesha elide kodwa ibe yimpumelelo, emva koko kwaqala ukuvela ezinye iilwimi. Oko kukuthi, ngo-2011 kwakukho umdlalo ohlekisayo, ngo-2013 imuvi kwaye ngo-2020 a dlala, Zonke ziphefumlelwe ngumlingiswa o-sexy womfazi wasekhaya waseIndiya.
IiAdventures zikaSavita Bhabhi
Ifomula ilula kwaye ihlala iphumelela xa kufikwa kumba wokukhulisa ubushushu bamadoda: USavita ngumfazi omncinci kwaye mhle, onomdla kwaye utshatile. Ukwazi okuncinci malunga namasiko amaIndiya, siyazi ukuba utshatile kuba iinwele zakhe zidayishwe ngombala obomvu ngokunzulu, kwaye unxibe icici legolide elilingana nelaseIndiya kumsesane womtshato.
USavita uhlala enxiba isari yesiko kunye neqhina elibomvu phakathi kwamashiya akhe, i bindi. Umyeni akekho ekhaya, ke ukuze ubaleke isithukuthezi, isithukuthezi kunye nokungoneliseki ngokwesini USavita unobuhlobo kakhulu kuye wonke umntu odlulayo. Kwaye ngobuhlobo sithi ulala nabo bonke. Akukho nto ikhoyo okanye yesono okanye engavumelekanga. Kukho nolunye ulwalamano olunokusityhila eNtshona ...
Ukuhlekisa kuyinyani I-saga yeziganeko zesondo ezingavumelekanga kwaye kungenxa yeso sizathu kanye yayiyimpazamo kulondolozo loluntu lwaseIndiya. Ukongeza, inyani yokuba i-comic iguqulelwe kwiilwimi ezisithoba ezidumileyo eIndiya inegalelo kwimpumelelo yayo. Impumelelo ebonakaliswe kwi Ababhalisi abangamawaka angama-30 ukuba iyazazi ukuba inosuku lwayo.
Impumelelo kaSavita Bhabhi nayo kuye kwabangela iingxoxo ezishushu phakathi kwezentlalo. Emva kwayo yonke loo nto kuthiwa nanamhlanje i-70% yabemi baseIndiya iseseMveli kakhulu. Kodwa, ukugweba kumdlalo ohlekisayo, umkhwa awenzi monki kwaye unxibe isree kwaye ujongeke ngokwesiko oko akuthethi ukuba awunakho ukukhokelela kubomi obusebenzayo kunye nokuba bukhululekile kubomi bezesondo ngokwemigangatho yakho yenkcubeko.
Yiloo nto ke uSavita Bhabhi ebonisa kakuhle, kwenzeka ntoni ngaphakathi kwaye akunjalo galela la gallerie. Sonke siyazi ukuba izinto zenzeka ngaphakathi endlwini, kodwa akukho mntu uthetha ngayo ... okanye ubuncinci kwakungekho ntetho ininzi e-India de kwafika le comic.
Kodwa ngaba izinto zitshintshile eIndiya? Hayi, kubonakala ngathi amaIndiya akakalungeli kutshintsho lwesini. Ngayiphi na imeko, ingxoxo ephakanyisiweyo ihlala intle kwaye ivumela izizukulwana ezincinci ukuba zixoxe ubuncinci ngobomi babo bezesondo ngaphandle kweetaboos.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » USavita Bhabhi: Eyona Comic idumileyo kunye nephikisayo eIndiya